On sokukhulelwa nethonya oqondile yezici ezihlukahlukene, ezihlanganisa hhayi kuphela esimweni ngokomzwelo, kodwa yabangela lesi sifo noma okubi kakhulu of pathologies kuluthola. Kusukela ukubukeka kwabo kuxhomeke ngqo indawo kanye umsebenzi umzanyana.
Kuyini placenta phakathi nenkathi yokukhulelwa?
Placenta - yisona sakhiwo ebaluleke kakhulu, lapho inkululeko nentuthuko egcwele umntwana ongakazalwa. It uqala ukwakha ngemva kwamasonto-14, futhi ngemva placenta ngesikhathi sokukhulelwa ngenkuthalo enze le misebenzi elandelayo:
Linikeza umoya-mpilo kanye nokudla ingane. Placenta etholakala kwakhiwa carbon dioxide futhi yonke imikhiqizo imfucuza.
Ikusasa ingane aphakele izakhamzimba izenzo ezinodlame ku amagciwane kakhulu. Ngeshwa, ngokusebenzisa Ukuvikelwa esinomhlapho ihlolwe izidakamizwa, utshwala, i-nicotine nezidakamizwa.
It yenza amahomoni ubophezelekile ukunakekela sokukhulelwa,
Liqinisekisa ukuthuthukiswa evamile wayo nokukhula kwayo kuyisimangaliso umntwana ongakazalwa.
Yini uzokutshela ultrasound?
Indlela ezethembekayo kabusha ukuhlolwa Inhloso isimo nge placenta, kuyinto ultrasound. Phakathi nendawo yomhlangano kunqunywa ukujiya kanye placenta Kulinganiselwa isakhiwo kanye degree yayo labo lokuvuthwa akufani.
Eminyakeni yonke inkathi yokukhulelwa placenta egcina izigaba eziningana ukuthuthukiswa:
I-zero degree - kumiswa placenta kwenzeka ngaphambi kwamasonto angu-30.
degree Okokuqala - imele isinyathelo ukukhula esinomhlapho. On luhlolo, ultrasound ebonakalayo ehlukene umzimba izingxenye. Lokhu libhekene ngezinga elithile 27 kuya 34 ngesonto.
degree Okwesibili - ngesikhathi ultrasound wabonakaliswa ngokucacile placenta isakhiwo inamagquma (34 kuya ku-38 ngesonto).
degree Okwesithathu - ne ultrasound luhlolo ebonisa ukuthi isakhiwo has simise Lobed, kukhona calcifications eziningi, isb kukhona ukuguga placenta (38 kuya 42 amasonto).
Ngo ezithile isikhathi placenta ngesikhathi sokukhulelwa kufanele ukujiya ezifanele, ebheka ukusebenza kwawo okuvamile. Uma nokuvuthwa senzeka ngaphambi kwesikhathi, thina-ke siyakhuluma ngenhlekelele ekuseni ukuguga umzanyana. Esikhathini isimo eyalandela kubalulekile ukuba afeze ukuqapha njalo of ultrasound futhi alondoloze ukusebenza umzanyana ekuzalweni. Hypertrophy ka-placenta ekukhulelweni (placenta ukuguga) - ngempela isifo esiyingozi, okuholela hypoxia (yokushodelwa umoya) ku-fetus. Ngakho-ke lokuzalwa e abesifazane Uyi phambili kancane schedule.
Kwenzekani placenta ngesikhathi sokubeletha?
Emva kokuzalwa placenta ingane yakho iqala ekuhlehleni futhi, ukuvumela ukuba ahlukane odongeni lesizalo. Ngemva kokubeletha, ukuze uqiniseke ukuthi lilonke, udokotela ehlola wakhe. Ukuba khona izinsalela esibelethweni kubangela polyp.
polyp esinomhlapho ngesikhathi sokukhulelwa ingekho. Izizathu eziyinhloko ukubonakaliswa yayo ukususwa akuphelele umzanyana ngesikhathi sokubeletha, ukuphuphunyelwa yisisu noma isisu. Lesi sifo bungabonakala uphawu elandelayo - nokunwetshiwe zokubona. Uma inkinga yakho kuyadingeka ukubonana nodokotela asikisele. Kungenjalo, polyp kuyoba imbangela yezifo eziningi - izifo ezingelapheki, ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda, futhi ezimweni ezimbi kakhulu - ebangela ukungabi nenzalo.
Polyp ngomshini ultrasound kulandzelana nekuhlunga tinsita. imithi yabo kuyinto nokususa we umgodi lesizalo.
Uma sikhuluma izinyathelo, kufanele wazi ukuthi imbangela eyinhloko polyp esinomhlapho is eliphansi (mhlawumbe akuphephile) izisu. Ngemva isisu noma isibonelo sokukhulelwa non-iphila kudingekile ukubhekwa izisebenzi. Akubuzwa, ukudiliva kufanele eyenziwa abaqeqeshiwe abanolwazi abafeza ngokucophelela luhlolo nangemuva kokuzalwa komntwana we umgodi lesizalo.
Unake impilo yakho. Esimeni yiziphi izinguquko ukubika ngokushesha kudokotela onguchwepheshe. Zinakekele futhi ingane yakho engakazalwa.
Abazali abalindele: ubulili sengane ukuba sikwazi ukubala usuku isisu